Tareenka Xawaaraha Sare ee Aad u adag (YHT) dhaleeceyn ka timid Yurub | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDhaqdhaqaaq adag (YHT) ee dhaleeceynta Yurub
Dhaqdhaqaaq adag (YHT) ee dhaleeceynta Yurub
02 / 08 / 2014 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Tareen Yurub Xawaaraha Sare ka dhaleeceyn aad u adag (YHT): OSCE dalka Turkiga, si ay wax miiran xorriyadda ee geedi socodka doorashada yimid dhowr dhaleeceeynta nidaamka dacaayadda.
Turkey ayaa sidoo kale xubin ka ahaa Security Yurub iyo Iskaashiga Organization (OSCE) ee Turkey, nidaamka dacaayad ah in geeddi-socodka doorashada, dhaleecayn badan oo u yimid in ay wax miiran xorriyadda.
OSCE-da ayaa carabka ku adkeysay in dacaayadda Raiisel wasaare Erdogan ee doorashada madaxtinimada “ay ku midoobeyso ururada gobolka”, halka musharixiinta kale ay leeyihiin muuqaal yar oo xagga warbaahinta ah.
ku saabsan xoriyadda warbaahinta dalka Turkiga si dhaleeceyn weyn in OSCE ah, "sida jirin xornimada tifaftirka," ayuu carabka ku adkeeyay in dhiig baa xukuma.
doorashooyinka soo socda madaxweynaha dalka Turkiga ka hor wafdi observer hordhaca ah ee diraha OSCE ah, kuwaas oo warbixinta lagu faafiyey bogga internetka rasmiga ah ee goobjoogayaasha.
Waa kuwan qodobbada laga soo xigtay warbixinta OSCE:
“MADAXWEYNAHA MADAXWEYNE FARMAAJO WAXYAABAHA AY KU SAMEEYSAA SHAQAALAHA DUGSIYADA”
“Hawlaha dacaayadda ee Raiisil Wasaaraha waa ururo baaxad weyn, oo had iyo jeer lagu daro ururo dowladeed oo rasmi ah. In kasta oo murashaxiinta kale ay si firfircoon u ololeynayaan, aragtidooda shacabka waa mid kooban.
MADAXWEYNE ERDOĞAN SI AY UGU BILAAWATO 'Furitaanka Tababbarka'
"Bishii Luulyo 25 Erdoğan wuxuu sameeyay dacaayad dadweyne intii lagu gudajiray xafladda furitaanka tareenka xawaaraha dheereeya, kaasoo socon doona inta udhaxeysa Istanbul iyo Ankara."
K XAQAALADA XAALADA KHUDBADKA ”
Qaab-dhismeedka sharciga ee hadda jira wuxuu xaddidey xorriyadda hadalka, oo ay ku jirto internetka. Kuwa ku lug lahaa OSCE / ODIHR Xusuus-qorka Xaddidan ee Doorashada (SSGH) waxay walaac ka muujiyeen in faragelinta tooska ah ee milkiileyaasha warbaahinta iyo jilayaasha siyaasadda iyo xorriyadda baahinta ay horseedi doonto weriye ka madax-bannaan madax-bannaanida iyo cilmi-baarista, isla markaana xaddidi doonta dhaleeceynta ka dhanka ah xisbiga talada haya iyo Ra'iisul Wasaaraha.
"Go'aannada ku saabsan codbixinta codbixinta sare waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuq"
Bazı qaar ka mid ah talooyinka aasaasiga ah ee OSCE / ODHIR ee ku saabsan arrimo kala duwan, oo ay ku jiraan maqnaanshaha rafcaanka ee go'aannada SBE iyo la'aanta shuruucda sharciga ah ee hay'adaha caalamiga ah iyo muwaadiniinta si ay u qabtaan indha indheynta doorashada, ayaan wali la tixgelin. ”
“Dastuurku wuxuu siinayaa wax xakameyn xornimo ah oo khariidad ah”
Dastuurku wuxuu oggol yahay, dhexgalka, xaddidaadda xorriyadda hadalka si loo ilaaliyo hufnaanta aasaaska Jamhuuriyadda iyo sharafta aan la arki karin ee dowladdu ku leedahay dhulkeeda iyo qarankeeda; waxay curyaamineysaa ilaalinta wax ku oolka ah ee xorriyadda hadalka iyo is-weydaarsiga fikradaha badan ee danaha dadweynaha. Intaa waxaa u dheer, sababaha kale, qodobbada Xeerka Ciqaabta iyo Sharciga La-dagaallanka Argagixisnimada ee ku saabsan sharaf-dilka umada dalka Turkiga iyo dacaayadaha ay ku taageerayaan urur kasta oo argagixiso ah ayaa loo adeegsaday aasaaska xukun-dilka iyo xiritaanka suxufiyiinta.
"20 JOURNALIST wuxuu kujiraa xabsiga"
"Wakiilka OSCE ee Xoriyadda Saxaafadda (MÖT) ayaa sheegay in kadib markii la siidaayay qaar ka mid ah wariyaasha 20."
WAAJIBAAD KU SAABSAN HESHIISKA HADA
Bulshada warbaahinta waxaa xukuma kooxo waaweyn oo warshado ah oo leh ururo warbaahin oo ku qalabaysan sida ugu balaaran ee lagu gaari karo shacabka. Jawaabayaasha OSCE / ODIHR SSGH waxay walaac ka muujiyeen in faragelinta tooska ah ee agaasimayaasha warbaahinta iyo jilayaasha siyaasada ee xoriyada tifaftirka ay horseedi doonto luminta madax banaanida tifaftirka iyo joornaaliistaha baarista.
“TALOOYIN KU SAABSAN SHAQADA WAA LAGA HELI KARAA LACAG-LA'AAN KU SAABSAN SHAQADA”
Ilar walaac ayaa laga muujiyay arrinta ku saabsan soo iibsiga dowladeed iyo xayeysiinta shirkadaha ay dowladu leedahay ganacsiyada laxiriira dowlada, iyo dhaleeceynta kooban ee warbaahintu u hayso xisbiga talada haya iyo Raiisul wasaaraha, gaar ahaan telefishanka.
“XUQUUQAHA KA SOCDA MADAXWEYNE KU XIGEENKA GARSOORKA GARSOORKA OO Kordhinaysa Awoodda Maamulka”
Çok Dacwado fara badan oo dowladeed iyo sumcad xumo ay soo gudbiyeen dad aad u sareeya, oo uu ku jiro Raiisul Wasaaraha, waxay kordhinayaan faafreebka suxufiyiinta. "
“SHARCIYADA CUSUB EE INUU KUU SAMEyn KARO Jumlado”
Rağmen In kasta oo lagu xadgudbay xorriyadda internetka, haddana internetku wuxuu gacan ka geystaa hannaanka badan ee bulshada guud ahaan, gaar ahaan warbaahinta bulshada. Xeerka '2014' ee internetka ', kaas oo markii ugu dambeysay wax laga beddelay bishii Febraayo 2007, wuxuu u oggolaanayaa mas'uuliyiinta inay xayiraan marin u helka bogagga internetka iyada oo aan kormeero garsoor oo ku filan laga helin. "
“DACWADAHA TRT WAA LAGU SAMEEYAY XUKUUMADAHA AKP EE RTÜK”
Sharciga ama go'aamada SBE midkoodna kuma qotomo mabaadiida ugu weyn ee ku saabsan sida loo adeegsan karo mabda'a dhexdhexaadnimada. OSCE / ODIHR SSGH waxay ka heshay hadalo is khilaafsan xubnaha kala duwan ee 'RTÜK' kuna saabsan waajibka ah eex eex la'aan. 3 July, RTÜK by afar xubnood oo ay xisbiyada mucaaradka, xubnaha ee gobolka, taas oo Radio Turkey iyo Television Corporation (TRT), publications Mr. soo magacaabay. Dacwad ka dhan ah Erdogan dhiniciisa waxaa diiday shan xubnood oo ka tirsan RTÜK oo uu magacaabay xisbiga talada haya Mr. Oyla
Dhibaatada mashiinka Metrobus ee ka imanaya Masiixiyiinta
IMO ee qoritaanka gaadiidka ee magaalada Bursa
Aydın ayaa dhaleeceeyay khadadka taraamka-tareenka ee magaalada
YHT laga soo bilaabo Özen
Hoggaamiyaha CHP Kılıçdaroğlu'dan naqshadeynta metro
Ra'iisul-wasaare Erdogan oo loo wareejiyay Kılıçdaroge Metro
MHP Tifaftirka Guddoomiyaha Degmada Torbali ee IZBAN
Degmada Canalioðludan dhaleeceynta tareenka Trabzon-Erzincan
MHP ayaa dhaleecaysay warshadda gawaarida
Istanbul metro Gebze iyo Dilovası ayaa iman doona
Miyuu YHT saameynayaa jadwalka baska
Tareenka xawaaraha sare leh ee u socda si loo xaqiijiyo kala-guurka Aasiyaanka-Yurub
Dhibaatada Eregli-Devrek ee Dhibaatada CHP